रिहा भएलगत्तै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लाग्यो अर्को झट्का, युवा संघले दियो यस्तो कडा चेतावनी — Sanchar Kendra
१७ सातापछि फेरि बढ्यो विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण
२इटहरीमा विप्लवसहितका ४ दलको जनसभा सुरु हुँदै, सञ्चारकेन्द्रबाट प्रत्यक्ष प्रशारण (LIVE) हुँदै
३यो वर्ष कोरोना महामारी अन्त्य नहुने डब्लूएचओको चेतावनी
५ताप्लेजुङ दोभान बजारमा आगलागी, ३५ घर जलेर नष्ट
६उपचारका लागि भारत पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई आज स्वदेश फर्किदै
७तोलामा १७०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
८विप्लवसहितका ४ दलको जनसभा आज इटहरीमा, क कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
९ओली पक्षले सांसद् आफ्नो पक्षमा तान्न यतिसम्म गरेपछि…
१०राती १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो फेरि यस्तो नयाँ निर्णय, जनता मारमा पर्ने निश्चित
११यस्ता छन मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३२ निर्णय
१२महासंघको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै १३ पत्रकार संगठनले जारी गरे पाँच बुँदे प्रतिवद्धतासहितकाे संयुक्त विज्ञप्ति
रिहा भएलगत्तै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लाग्यो अर्को झट्का, युवा संघले दियो यस्तो कडा चेतावनी
काठमाडौँ । आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रिहा भएलगत्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले कास्की प्रवेश नगर्न चेतावनी दिएको छ । युवा संघ नेपाल कास्कीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहीलाई कास्कीमा प्रवेश निषेध घोषणा गरेको हो । तत्कालीन वाइसिएल नेपाल कास्की र तत्कालीन युवा संघ नेपाल कास्कीका अध्यक्षद्वय भोजराज पौडेल र डिल्लीराम सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा शाहीले फेसबुक, युटुव र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको र द्वन्द्व गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको छ ।
‘पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र बहादुर शाह (ज्ञानेन्द्र शाही) जस्ता कुपात्रहरुलाई गणतान्त्रिक भूमि कास्कीमा प्रवेश निषेध गरेको जानकारी गराउदै आम न्यायप्रेमी जनसमुदायमा विधिको शासन, पछिल्लो परिवर्तन तथा उपलव्धिका पक्षमा उभिनुभई सहयोग गर्न अपिल गर्दर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यता राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले कुनैपनि राजनीतिक दलका गतिविधि र व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीति राष्ट्रिय युवा संघको नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले शाहीले पर्यटनमन्त्री लगायतलाई गरेको दुर्व्यवहारप्रतिको आक्रोशमा कास्कीमा त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्ने बताए । सापकोटाले स्थानीय कमिटीहरु आफ्नो तहमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको पनि बताए । सापकोटाले मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार नभएको र त्यो कानुनीरुपमा दण्डनीय भएको पनि उनले बताए ।
यस्तै नेकपा निकट विद्यार्थी र युवा संगठन बाँकेले पनि ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार बाँकेको नेपालगञ्जस्थित एयरपोर्टमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि शाही समूहले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै जनवर्गीय संगठनले भत्र्सना गरेका हुन । नेकपा निकट, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी, युवा संघ र वाईसिएलको जिल्ला नेतृत्वहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै हातपात एवं आक्रमण गर्नेप्रति निन्दा र खेद प्रकट गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार र नैतिकताको कुरा गर्नेहरु पहिला आफू शीष्ट हुन सिक्नुस भन्दै विज्ञप्तीमा आगामी दिनमा यस्ता हर्कत दोहोरिए ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि भएको दुव्र्यवहारको विषयमा स्पष्टिकरण दिन शाहीले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घम्साघम्सी भएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ललितपुर प्रहरी परिसरका एसपी दुर्गा सिंहले शाहीलाई हिरासतबाट मुक्त गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘आइन्दा अभद्र व्यवहार नगर्ने सर्त गराएर छाडेका हौं ।’ उनका अनुसार शाहीलाई यो सुध्रिने मौका हो । शाहीलगायतका युवाले गत शनिबार मन्त्री भट्टराईका कारण नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरको विमान काठमाडौं उड्न १ घण्टा ढिला भएको भन्दै विमानभित्रै गालीगलौज गरेका थिए । तर, गालीगलौजका क्रममा संयमित देखिएका भट्टराईले विमान उड्न निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेट ढिला भएको प्रष्टीकरण दिएका छन् र त्यसप्रति माफी पनि मागेका छन् । बुद्ध एयरले पनि शाहीको समूहले दाबी गरेजस्तो १ घण्टा नभएर १५ मिनेट मात्रै उडान ढिलो भएको जनाएको छ ।
शाहीलाई अभद्र व्यवहार कसूरसँगै गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभियसन) ऐन २०१५ विपरीत कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको थियो तर मन्त्री भट्टराईले नै मुद्दा चलाउन नदिएको स्रोतले बतायो।गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन २०१५ अनुसार उडानमा रहेका वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध आक्रामक व्यवहार गरेमा वा त्यस्तो काम कारवाहीले वायुयानको सुरक्षामा खतरा हुने सम्भावना भएमा त्यसलाई हवाई उडानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध मानिन्छ ।
उक्त दफा बमोजिमको ‘अपराध गर्नेलाई जन्म कैद र त्यस्तो अपराध गर्न उद्योग गर्ने वा मतियार हुनेलाई पन्ध्रदेखि बीस वर्षसम्म कैद’ हुने कानुनी ब्यबस्था छ । आइतबार मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि नेपालगञ्जमा जहाजभित्र दुर्व्यवहार भएको उनको सचिवालयले बताएको थियो ।
यसैबीच नेपालगञ्ज घटनाको विवादबारे बुद्ध एयरले बल्लतल्ल मुख खोलेको छ । नेपालगञ्जमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि हुलहुल्लज गर्दा पनि उडान थप ढिला भएको स्पष्टीकरण बुद्ध एयरले दिएको छ । बुद्ध एयरले सोमबार नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पठाएको प्रष्टिकरणमा विमान कम्पनीले मन्त्रीलाई पर्खिँन केही समय उडान रोकिएको स्वीकार गरेको छ । तर मन्त्री आइसकेपछि एउटा समूहले हुलहुज्लत गर्दा कारण उडानमा थप ढिलाई भएको र विमान समेत एकातिर ढल्किएको बुद्ध एयरले जनाएको छ ।
जहाजभित्र आक्रोशित समुहले मन्त्रीका कारण १ घन्टा पर्खाइएको दावी गरेका थिए । मन्त्री भट्टराईले भने आफ्ना कारण १५ मिनेट ढिलो भएको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन् । बुद्ध एयरको प्रष्टिकरण भट्टराईको दाबीसँग नजिक छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालगञ्जबाट ६ः४० मा उड्नुपर्ने बिमान २४ मिनेट ढिला गरी ७ः०४ मा उडेको थियो । यसमध्ये ६-८ मिनेट हुलहुज्जतले गर्दा र बाँकी मन्त्रीले गर्दा ढिलाई भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘घटनामा मन्त्रीका सुरक्षाकर्मी र सहयोगीले देखाएको संयमताले गर्दा आक्रोशित समूहलाई समयमै साम्य पारी उडान गरिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार यात्रुहरुलाई ६ः३० बजे विमानमा बोर्डिङ गराइएको थियो । त्यसअघि मन्त्रीका सहयोगीले ६ः२५ बजे नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत फोन गरेर धम्बोजी आइपुगेको जानकारी गराएका थिए । तर, फोनमा जानकारी गराइएभन्दा केही ढिला मन्त्री एयरपोर्ट प्रवेश गरेको बुद्ध एयरको भनाइ छ । विमानमा बसेको १० मिनेटसम्म जहाज नउडेपछि ६ः४० बजे १४/१५ जनाको समूह परिचारिकाहरुलाई अटेर गर्दै बाहिर निस्किएको र कर्मचारीहरुसँग विवाद गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘६ः५० बजे मन्त्री एयरपोर्ट आइपुगेपछि उत्तेजित समूहले उहाँलाई घेरे, तर उहाँ चुपचाप बिमानमा चढ्नुभयो । उहाँसँगै अन्य यात्रु पनि भित्र पसे । तर, ४-५ मिनेट एकै ठाउँ उभिएर विवाद गर्न थाल्दा एकै भागमा बढि वजन भएर विमान ढल्किएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ । यो समूहलाई साम्य बनाई उडान भर्दा अझै केही ढिलाई भएको पत्रमा उल्लेख छ ।